Arsenal oo qarka u saaran in ay u weyso bar-tilmaameedkeeda koowaad ee Thomas Lemar sababa la xiriira Atletico Madrid – Gool FM
Arsenal oo qarka u saaran in ay u weyso bar-tilmaameedkeeda koowaad ee Thomas Lemar sababa la xiriira Atletico Madrid
(Arsenal) 02 Juunyo 2018. Liverpool ayaa u muuqata mid ku guuldareesatay saxiixa xidiga bar-tilmaameedka u ahaa ee Thomas Lemar suuqa xagaaga, sababa la xiriira kooxda Atletico Madrid oo qarka u saaran in ay dhameystirto heshiiskiisa.
Wargeyka “Daily Express” ee dalka ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in xidiga kooxda reer France ee Monaco uu diirada u saarnaa kooxda Liverpool tan iyo xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kahor inta aysan iska diidin maamulka kooxdiisa reer France in ay iibiyaan xidigoodan.
Liverppl ayaa si rasmi ah ugu dhwaaqday Talaadadii lasoo dhaafay saxiixa khadka dhexe reer Brazil iyo kooxda Monaco Fabinho, kadib markii ay kula soo sxiixatay aduun dhan 44 milyan ginni, waxaa intaas sii dheer heshiiska Naby Keïta.
Si kastaba Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Atletico Madrid Andrea Berta, ayaa u safray dalka Faransiiska si uu wadahadal ula yeesho mas’uuliyiinta Monaco sababa la xiriira in ay ka doonayaan saxiixa Thomas Lemar xagaagan.
England oo ka adkaatay Nigeria...(Kabtan Kane oo Shabaqa gaaray)+SAWIRRO